Bible Mu Nsɛm Mmerantewa Baanan wɔ Babilon - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
ƆHENE Nebukadnesar de Israelfo a wonim nhoma no nyinaa kɔɔ Babilon. Akyiri yi ɔhene no yiyii wɔn a wɔn ho yɛ fɛ na wɔbɔ mmɔden kɛse no. Wɔn mu baanan ne mmerantewa a wuhu wɔn wɔ ha yi. Obiako ne Daniel, na baasa a aka no Babilonfo frɛɛ wɔn Sadrak, Mesak, ne Abednego.
Nebukadnesar yɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛtete mmerante no ma wɔasom wɔ n’ahemfie hɔ. Na mfe abiɛsa akyi no ɔbɛpaw wɔn mu nea ɔbɔ mmɔden sen biara no ma waboa no wɔ ne nsɛm a emu yɛ den ho dwumadi mu. Ná ɔhene pɛ sɛ mmerantewa no nya ahoɔden bere a wɔtete wɔn no. Enti ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ wɔmma wɔn aduan pa ne nsa a wɔde ma ɔne n’abusuafo no ara bi.
Hwɛ aberantewa Daniel. Wunim asɛm a ɔreka akyerɛ Nebukadnesar nkoahene Aspenas? Daniel reka akyerɛ no sɛ ɔmpɛ sɛ odi nnuan pa a efi ɔhene pon so no bi. Nanso ɛhaw Aspenas. Ɔkae sɛ: ‘Ɔhene akyerɛ nea ɛsɛ sɛ mudi na monom. Sɛ moannya ahoɔden te sɛ mmerante a aka no a, ebia obekum me.’
Enti Daniel kɔɔ onipa a na Aspenas de ɔne ne nnamfo baasa no ahyɛ ne nsa sɛ ɔnhwɛ wɔn so no nkyɛn. Ɔkae sɛ: ‘Yɛsrɛ wo, sɔ yɛn hwɛ dadu. Ma yɛn afumduan ne nsu. Na afei fa yɛn toto wɔn a wodi ɔhene aduan no ho.’
Wɔn so hwɛfo no penee so. Na dadu no twaam no, na Daniel ne ne nnamfo no honam aba wɔn ho asen mmerante a aka no nyinaa. Enti wɔn so hwɛfo no ma wɔkɔɔ so dii afumduan sen sɛ anka wobedi nea efi ɔhene no hɔ no.
Mfe abiɛsa awiei no wɔde wɔn nyinaa kɔɔ Nebukadnesar anim. Ɔne wɔn kasae no, ohui sɛ Daniel ne ne nnamfo baasa no bɔ mmɔden sen biara. Enti ɔma wɔboaa no ahemfie hɔ. Na bere biara a ɔhene no bisaa Daniel, Sadrak, Mesak ne Abednego asɛm no, na wɔn nimdeɛ boro n’asɔfo anaa anyansafo afoforo no biara de so mpɛn 10.
Henanom ne mmerantewa baanan a wɔwɔ mfonini no mu no, na dɛn nti na wɔwɔ Babilon?
Adwene bɛn na na Nebukadnesar afa wɔ mmerantewa baanan no ho, na ahyɛde bɛn na ɔde maa ne nkoa?
Ɛdefa aduan ne anonne ho no, dɛn na Daniel bisae de maa ɔne ne nnamfo baasa no?
Sɛ wɔde Daniel ne ne nnamfo baasa no a wodii afumduan dadu no toto mmerantewa afoforo no ho a, na wɔte dɛn?
Ɛyɛɛ dɛn na Daniel ne ne nnamfo baasa no bepuee ahemfie hɔ, na ɔkwan bɛn so na wɔbɔ mmɔden sen asɔfo ne anyansafo no?
Kenkan Daniel 1:1-21.
Sɛ yɛpɛ sɛ yetumi ko tia sɔhwɛ ne mmerɛwyɛ ahorow a, mmɔdenbɔ bɛn na ɛho hia? (Dan. 1:8; Gen. 39:7, 10; Gal. 6:9)
Akwan bɛn so na ebia nnɛ wɔbɛsɔ mmabun ahwɛ anaa wɔbɛhyɛ sɛ wonni nea ebinom bu no sɛ ‘ahennuan’ no bi? (Dan. 1:8; Mmeb. 20:1; 2 Kor. 6:17-7:1)
Ntease bɛn na Bible kyerɛwtohɔ a ɛfa Hebrifo mmerantewa baanan no ho no boa yɛn ma yenya wɔ wiase nimdeɛ a yebenya ho? (Dan. 1:20; Yes. 54:13; 1 Kor. 3:18-20)